မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့ စီစဉ်ထုတ်လွှင့်ပုံကို မေးခွန်ထုတ်လိုက်ပြီး မြန်မာအိုင်ဒေါကို သွားမပြိုင်ကြဖို့ ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် သီရိဝင်းလှိုင် - CeleLove
October 12, 2019 Cele Love အနုပညာလောက 0
Myanmar Idol Season4ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို တော်တော်များများတော့ကြည့်ဖြစ်ပြီးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော် ApannPyay ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ … ။ အဲ့ဒီအထဲကမှ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ အသံပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ရော တွေ့နေကြပြီလားဗျို့ … ။
အပြိုင်အဆိုင်လည်း အားပေးနေကြတာမြင်ရသလို ကိုယ့်ရဲ့ Idol လေးကို ဝန်းရံမယ့်သူတွေကလည်း အဆင်သင့်ကိုစောင့်မျှော်နေကြတာလည်း Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲရဲ့ အစဉ်အလာလိုကို ဖြစ်နေပြီး ဒီနှစ်မှာလည်း ထူးခြားတဲ့ အသံပိုင်ရှင် နဲ့ ပါရမီရှင် ပြိုင်ပွဲဝင် တွေ တဦးပြီးတဦး ထွက်ပေါ်လာနေပြန်ပါပြီနော် … ။
Myanmar Idol အဆိုပြိုင်ပွဲဟာ ပဏာမအသံစစ်ဆေးခြင်း Judges Audition အဆင့်ကို ပြီးမြောက်လို့ Golden Week အနေနဲ့ Theatre Round 1 အဆင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုကို စတင်ထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေ ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာအခြေအနေတစ်ခုကို ရောက်လာပြီး ကိုယ်အားပေးတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ အဆိုပညာ အရည်အသွေးတွေကိုလည်း ပိုပြီး ထင်ရှားလာပြီဖြစ်ပါတယ် … ။
လတ်တလော အားလုံးကိုလှုပ်ခတ်သွားခဲ့တာကတော့ Myanmar Idol Season4မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်​ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် သီရိဝင်းလှိုင်ရဲ့ Myanmar Idol အစီအစဉ် ထုတ်လွှင့်ပုံကို ဝေဖန်ချက်ကြောင့် ပွဲဆူသွားစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။
ပြိုင်ပွဲဝင် သီရီဝင်းလှိုင်ရဲ့ Myanmar Idol အစီအစဉ် အပေါ် ဝေဖန်ထားတဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခုကို တွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် …. ။ ပြိုင်ပွဲဝင် သီရိဝင်းလှိုင်ဟာ Judges Auditon အဆင့်မှာ မနက် ၄ နာရီ မိုးလင်းချိန်မှာ အသံစစ်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပြီး ဒိုင်တွေကပေးတဲ့ Golden Ticket ကို ရရှိခဲ့တယ် လို့ ဆိုပါတယ် … ။
ဒါပေမဲ့ Golden Ticket ရရှိသူ အားလုံးရဲ့ သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ပုံကို ရုပ်သံမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပေမဲ့ သူရဲ့သီဆိုပုံကိုတော့ ရုပ်သံမှာ ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ရာမှာ ထည့်သွင်းပေးခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့် သူက Myanmar Idol တာဝန်ရှိ လူကြီးမင်းများထံ မေးခွန်းထုတ်သွားခဲ့တာပဖြစ်ပါတယ် … ။
ဒါ့အပြင် Golden Week မှာ သူ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ သီဆိုမှုကိုလည်း ရုပ်သံမှာ ထပ်မံ မပြသခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံက အနုပညာပါရမီရှိသူတွေ ဒီလို ပြိုင်ပွဲမျိုးကို သွားမပြိုင်သင့်ဘူးလို့ အကြံပေးလိုကြောင်း၊ ဒါဟာ အနုပညာ ပါရမီရှိသူတွေ နဲ့ ဝါသနာရှင်တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ရိုက်ချိုးလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ မျှတမှုမရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ကို သူများတွေလို ငြိမ်မခံတတ်လို့ အခုဖြစ်ရပ်ရဲ့ အမှန်တရားကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့ပို့စ်လေးမှာ တွေ့ရှိခဲ့ရတာပါ။
ဒါဟာ ဘယ်လို ဂယက်တွေ ဆက်လက်ထွက် ပေါ် လာစေဦးမလဲ၊ Myanmar Idol ဘက်ကရော ဒီဖြစ်ရပ်အတွက် ဘယ်လို တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုတွေ ပြုလုပ်လာမလဲ ဆိုတာကိုလည်း Myanmar Idol ပရိသတ်တွေက စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ …. ။
မွနျမာအိုငျဒေါရဲ့ စီစဉျထုတျလှငျ့ပုံကို မေးခှနျထုတျလိုကျပွီး မွနျမာအိုငျဒေါကို သှားမပွိုငျကွဖို့ ဝဖေနျလိုကျတဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျ သီရိဝငျးလှိုငျ
Myanmar Idol Season4ပွိုငျပှဲဝငျတှကေို တျောတျောမြားမြားတော့ကွညျ့ဖွဈပွီးဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော ApannPyay ခဈြပရိသတျကွီးတို့ရေ … ။ အဲ့ဒီအထဲကမှ ကိုယျသဘောကတြဲ့ အသံပိုငျရှငျတဈယောကျရော တှနေ့ကွေပွီလားဗြို့ … ။
အပွိုငျအဆိုငျလညျး အားပေးနကွေတာမွငျရသလို ကိုယျ့ရဲ့ Idol လေးကို ဝနျးရံမယျ့သူတှကေလညျး အဆငျသငျ့ကိုစောငျ့မြှျောနကွေတာလညျး Myanmar Idol ပွိုငျပှဲရဲ့ အစဉျအလာလိုကို ဖွဈနပွေီး ဒီနှဈမှာလညျး ထူးခွားတဲ့ အသံပိုငျရှငျ နဲ့ ပါရမီရှငျ ပွိုငျပှဲဝငျ တှေ တဦးပွီးတဦး ထှကျပျေါလာနပွေနျပါပွီနျော … ။
Myanmar Idol အဆိုပွိုငျပှဲဟာ ပဏာမအသံစဈဆေးခွငျး Judges Audition အဆငျ့ကို ပွီးမွောကျလို့ Golden Week အနနေဲ့ Theatre Round 1 အဆငျ့ ယှဉျပွိုငျမှုကို စတငျထုတျလှငျ့ပွသနပွေီဖွဈလို့ ပရိသတျတှေ ပိုပွီးစိတျလှုပျရှားစရာအခွအေနတေဈခုကို ရောကျလာပွီး ကိုယျအားပေးတဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျတှရေဲ့ အဆိုပညာ အရညျအသှေးတှကေိုလညျး ပိုပွီး ထငျရှားလာပွီဖွဈပါတယျ … ။
လတျတလော အားလုံးကိုလှုပျခတျသှားခဲ့တာကတော့ Myanmar Idol Season4မှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျ​ခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျ သီရိဝငျးလှိုငျရဲ့ Myanmar Idol အစီအစဉျ ထုတျလှငျ့ပုံကို ဝဖေနျခကျြကွောငျ့ ပှဲဆူသှားစခေဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ … ။
ပွိုငျပှဲဝငျ သီရီဝငျးလှိုငျရဲ့ Myanmar Idol အစီအစဉျ အပျေါ ဝဖေနျထားတဲ့ ပို့ဈလေးတဈခုကို တှခေဲ့ရတာပဲဖွဈပါတယျ …. ။ ပွိုငျပှဲဝငျ သီရိဝငျးလှိုငျဟာ Judges Auditon အဆငျ့မှာ မနကျ ၄ နာရီ မိုးလငျးခြိနျမှာ အသံစဈခဲ့ရတယျလို့ သိရပွီး ဒိုငျတှကေပေးတဲ့ Golden Ticket ကို ရရှိခဲ့တယျ လို့ ဆိုပါတယျ … ။
ဒါပမေဲ့ Golden Ticket ရရှိသူ အားလုံးရဲ့ သီဆိုယှဉျပွိုငျပုံကို ရုပျသံမှာ ထုတျလှငျ့ပွသခဲ့ပမေဲ့ သူရဲ့သီဆိုပုံကိုတော့ ရုပျသံမှာ ထုတျလှငျ့တငျဆကျရာမှာ ထညျ့သှငျးပေးခဲ့ခွငျးမရှိတာကွောငျ့ သူက Myanmar Idol တာဝနျရှိ လူကွီးမငျးမြားထံ မေးခှနျးထုတျသှားခဲ့တာပွဖွဈပါတယျ … ။
ဒါ့အပွငျ Golden Week မှာ သူ ပါဝငျယှဉျပွိုငျခဲ့တဲ့ သီဆိုမှုကိုလညျး ရုပျသံမှာ ထပျမံ မပွသခဲ့ကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံက အနုပညာပါရမီရှိသူတှေ ဒီလို ပွိုငျပှဲမြိုးကို သှားမပွိုငျသငျ့ဘူးလို့ အကွံပေးလိုကွောငျး၊ ဒါဟာ အနုပညာ ပါရမီရှိသူတှေ နဲ့ ဝါသနာရှငျတှရေဲ့ စိတျဓာတျကို ရိုကျခြိုးလိုကျခွငျးသာ ဖွဈကွောငျး၊ မြှတမှုမရှိတဲ့ လုပျရပျကို သူမြားတှလေို ငွိမျမခံတတျလို့ အခုဖွဈရပျရဲ့ အမှနျတရားကို ထုတျဖျောပွောဆိုခွငျးဖွဈကွောငျး သူ့ရဲ့ပို့ဈလေးမှာ တှရှေိ့ခဲ့ရတာပါ။
ဒါဟာ ဘယျလို ဂယကျတှေ ဆကျလကျထှကျ ပျေါ လာစဦေးမလဲ၊ Myanmar Idol ဘကျကရော ဒီဖွဈရပျအတှကျ ဘယျလို တုံ့ပွနျဖွရှေငျးမှုတှေ ပွုလုပျလာမလဲ ဆိုတာကိုလညျး Myanmar Idol ပရိသတျတှကေ စိတျဝငျတစား စောငျ့ကွညျ့နကွေတာဖွဈပါတယျ ပရိတျသတျကွီးရေ …. ။
“(10) လပိုင်းအတွက် ၇ရက်သားသမီး တစ်လစာ ဟောစာတမ်း”